Thursday July 30, 2020 - 19:11:23 in Wararka by Super Admin
Dhammaan Maamulka iyo Howlwadeenada Shabakadda SomaliMeMo waxay hambalyada Ciidul Adxaa 1441 u dirayaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, waxaana ALLAH ka baryaynaa in uu nabad iyo baraare nagu gaarsiiyo Ciidda kale.
Waxaan si gaar ah ugu hambalyeyneynaa Shacabka Soomaaliyeed ee ku sugana gudaha dalka hooyo, waxaana u rajeyneynaa inuu Rabbigeen ka samata-bixiyo dhibaatada oo ay helaan nabad waarta oo ay ku naaloodaan farxaddana kula wadaagaan walaalahooda meel kasta oo ay joogaan.
Sidoo kale waxaan hambalyada si khaas ah ugu direynaa aqristayaasha sharafta leh ee ku xiran Shabakadda SomaliMeMo meel kasta oo ay dunida dacalladeeda ka joogaan waxaana leennahay Hambalyo.
Umadda Soomaaliyeed waxaan alle uga baryaynaa in uu dalka nooga saaro shisheeyaha gumeystayaasha ee kusoo duulay uuna guuleeyo muslimiinta u halgamaysa in shareecada islaamka laysku maamulo.
Warbaahinta xurta ah ee SomaliMeMo waxay shacabka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan kala qeyb qaadanaysaa farxadda maalmaha ciidda iyadoona shabakaddu baahin doonto wararka iyo Fantasyada ku saabsan damaashaadka ciidda Insha ALLAH.